​जनता बैंकको नाफा ६ करोड ३९ लाख
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा जनता बैंकको नाफा बढेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा बैंकले ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आवको सोही..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ महिनामा ५० करोड मुनाफा कमायो
काठमाडौं, मंसिर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनाभन्दा १७.८ प्रतिशले कमी हो..
काठमाडौं । जासुसी उपकरण बोकेर नेपाल आएका टर्किस, रोमानियन र बुल्गेरियन नागरिकले विभिन्न बैंकका ४ हजार ग्राहकको पिन नम्बर चोरी गरेको खुलेको छ । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार एटिएम..
माछापुच्छ्रे बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गदै
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई दुई बराबर १ अर्थात ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद बितरण गर्न लागेको हो..
​स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पहिलो त्रैमाशको नाफा ३५ करोड
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा नाफा सामान्य बढेको छ । बैंकले चालु आवको असोजसम्म ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आवको सोही..
​नेपाल बैंकले कसरी बढ्यो १६२ प्रतिशत मुनाफा? प्रतिशेयर आम्दानी नै ७१ रुपैयाँ
काठमाडौ । नेपाल बैंकले पहिलो त्रैमासमा मुनाफा १६२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो बर्षको सोहि अवधिमा बैकले जम्मा ४४ करोड ४३..
हिमालयन बैंकको तीन महिनाको मुनाफा ४३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, प्रतिशेयर आम्दानी ३८ रुपैयाँ
काठमाडौ । हिमालयन बैंकले यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुनाफा ४३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । जुन गत वर्षको ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ भन्दा ३६.०२ प्रतिशतले..
कुमारी बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। आज सम्पन्न बिशेष साधारण सभाले हालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६९ करोडको ५० प्रतिशत हकप्रद..
​एनसीसी बैंकले पहिलो त्रैमासमा १३ करोड रुपैया कमायो
काठमाडौं । एनसीसी बैंकले पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले मुनाफा १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । बैंकले..
बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले २७ करोड कमायो , प्रतिशेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीले पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा ६० दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि गरी २७ करोड ९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले..
एभरेष्ट बैंकले पहिलो त्रैमासमा ५१ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमायो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा ५१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ जुन अघिल्लो बर्षको तुलनाभन्दा ४१.३२ प्रतिशतले वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा..
एटीएम कार्ड असुरक्षित हुनुमा दोषी को ? अझै जारी भएन ‘चिप बेस कार्ड’
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा देखिएका एटीएम ठगीका घटनाका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै कमजोरी रहेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोगमा ल्याएका डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेडलगायत ‘म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्डको प्रतिस्थापनमा..
नेपालमा ३ हजार एटिएम कार्ड ह्याक
काठमाडौं । नेपालमा पक्राउ परेका तीनवटा युरोपियन समूहले तीन हजारभन्दा धेरै एटिएम ह्याक गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । जसमध्ये पाँच सयभन्दा धेरै नेपालीको रहेको प्रहरी अनुमान छ । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान..
माछापुच्छ्रे बैंकले तीन महिनामा २४ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । गत असोजसम्म बैंकले २४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा..
​अप्पर बलेफी ‘ए’मा बैंकहरुको चार अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमइ बैंकले अप्पर बलेफी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्न सम्झौता गरेको छ । आयोजनामा ग्लोबलका साथै एभरेष्ट, सानिमा, नेपाल एसबिआइ र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले ऋण लगानी गर्ने..
गोखार्ज फाइनान्सको नाफा ६ करोड ३५ लाख, खराब कर्जा १० प्रतिशत माथि
काठमाडौं । गोखार्ज फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत..
काठमाडौं । रिलायबल माईक्रोफाइनान्सले पहिलो त्रैमासमा खुद्मुनाफा ३७ लाख रुपैयाँ कमाएको छ, जुन गत वर्षको तुलनाभन्दा १३ दशमलव ६६ रुपैयाँ घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा मुनाफा ४३ लाख..
प्रभु बैंकले तीन महिनामा २८ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनाभन्दा ८ दशमलव ०४ प्रतिशतले मात्र..
स्वदेशी लघुवित्त संस्थाले तीन लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्ने
काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तीन लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । जसका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । आएपिओ जारी गरेपछि संस्थाको..
तरलताबारे राष्ट्र बैंक र बैंकरका फरक मत
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थितिका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच फरक मत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता समस्या अझै नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैंकहरु..
​तपाई एटिएम कार्ड बोक्नु हुन्छ भने तुरुन्त पिन नम्बर परिवर्तन गर्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले बैंकको एटिएम प्रयोगकर्ताहरुलाई तत्कालै आफ्नो पिन नम्बर परिवर्तन गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्काको एटिएम पिन नम्बर चोरी गरेर अनाधिकृत रुपमा पैसा चोर्ने गिरोह..
​नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले नाफा ७४ प्रतिशतले वृद्धि ७४ करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलना भन्दा ७४ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७४ करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाउन..
काठमाडौं । वैकिङ प्रणालीको अवस्था खुम्चँदै गएपछि बैंकहरुमा थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकरहरुका अनुसार अहिलो बैंकहरुसँग कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पर्याप्त पैसा छैन । बैंकहहरुसँग अहिले सर्वसाधरणलाई..
गरिमा विकास बैंकले ३ महिनामा ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कमायो
काठमाडौं। गरिमा विकास बैंकले पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा ६० दशमलव ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको भने गत वर्षको सोहि अवधिमा २ करोड ९१..
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको अध्यक्षमा राजन सिंह भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडको बोर्डको बैठकले सिटिजन्स् बैंकका सिईओ राजन सिंह भण्डारीलाई सर्वसम्मत रुपमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा पुर्ननियुक्त गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा अध्यक्षको रुपमा दोस्रो नियुक्त गरेको..
​जनता बैंकले त्रिवेणी विकास बैंकलाई गाभ्ने, पूँजि ५ अर्ब ५० करोड पुग्ने
काठमाडौ । जनता बैंक नेपालले त्रिबेणी बिकास बैंकलाई गाभ्ने भएको छ । मर्जरसम्बन्धी सैद्दान्तिक सहमतिपत्रमा दुबै बैंकका अधिकारीहरुले हस्ताक्षण गरेका छन् । मर्जपछि पनि बैंकको नाम र लोगो जनता बैंक नेपालकै..
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंक ले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व ७०ः३० अनुपात कायम गर्नका लागि ६७ हजार ७६७ कित्ता शेयरको नयाँ निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले नयाँ निष्काशनका लागि..
सानिमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाडौ । सानिमा बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । असोज २८ गते शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले कर प्रयोजनका लागि का..
हिमालपारी सडक विग्रिदा समेत दैनिक चार हजार धार्मिक पर्यटक
मुस्ताङ। मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथमा धार्मिक पर्यटकको भीड लागेको छ । मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र १०८ धारामा स्नान गर्न देशका विभिन्न भागबाट भक्तजन मुक्तिनाथ पुगेका हुन् । दसैँको बिदा मनाउन मुस्ताङ..
ओम र मनास्लु विकास बैंकवीच मर्ज गर्न समझदारी
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंकवीच मर्ज हुने भएको छ । मर्जरमा जानका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुंजी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ..
Results 1896: You are at page 30 of 64